Zeus zithandwa slot umdlalo ngokuphelele isekelwe Gods basezinganekwaneni. Isihloko sithi quirky kakhulu futhi okuthakazelisayo ukudlala, futhi it iza nabathile amabhonasi oncomekayo ukuthi kukhona nje kukuhle kakhulu ukuba kungaba yiqiniso. Kuyini okujabulisayo ngale game baye umkhankaso more imidlalo ezimbili ezifanayo. Ngenxa kwayo, Abantu bayahamba gaga phezu kwalo. Uma uthanda abanye imidlalo umlando-based nge ihluzo omangalisayo ngaleso sikhathi le Slots New No Idiphozithi kuyinto stop esifanele wena.
Mayelana ngunjiniyela Zeus Slots
Zeus is developed by the multinational company WMS that has been making some wonderful games. Ebheka ukuthandwa lokhu Slots New No game Deposit, WMS useqalile enezela eminye izici ezintsha kanye kwethulwa izinguqulo ezalandela. Le nkampani waphulile wonke amarekhodi la minyaka embalwa edlule ne kuragela amakhasimende. With the ubuchwepheshe wagxilisa lokhu Slots New No game Deposit, baye baphumelela ngokuphindaphindiwe.
Zeus siqukethe 30 paylines futhi 5 esondweni uhlelo ne sikhungo yokuwina inhlanganisela eziningi kulo mdlalo. Sinenkosi i amadlingozi ephathwayo okulula ukuyiqonda sici okuthiwa kabusha ukuphotha lapho ungakwazi kabusha spin ogcina ambikele zakho ezindala kwi bese uthole ukuzwa Slots New No Idiphozithi.
I basezinganekwaneni ephathwayo izici uNkulunkulu ngokwakhe namanye izinhlamvu like Pegasus nehabhu. Baphinde babe zemali yesiliva negolide. I umshini wokugembula ine 3 izimpawu ezibalulekile the chitha, nombani kanye noNkulunkulu uqobo.
Uphawu umbani uma abangelwe ungathola wena amabhonasi amaningi kanye inhlanganisela lokuwina kodwa chitha futhi inhlanganisela lightening ngeke isebenze. The esiphezulu uphawu Yokuwina iyona uNkulunkulu ngokwakhe, kodwa isebenza kuphela uma udlala ngo iqembu.
Ungakwazi ukunqoba imali yangempela yelithi $2,500 uma Wager linani lelifanele $150. Umshini futhi inikeza zemali ukuthi ungasebenzisa eyodwa ngesikhathi line ubuncane ukubheja at 0.30 zamadola esiphezulu at $5. Baphinde babe option isikhathi osindisa ukuzidlalela lapho ungakwazi uchofoze ukuzidlalela bese usetha izintandokazi zakho.
WMS liye lavuselelwa abanye omkhulu isici imidlalo mahhala futhi yathola ukunakwa okuningi. Kuchazwa izimo ezihlobene nokubhalwa umdlalo uqobo isici nice kakhulu futhi nge kuziwa amabhonasi kanye ihluzo ephelele ukuthi basuke kakhulu baziswa. Akumangalisi lokhu New Slots No umdlalo Deposit uyathandwa phakathi amakhasimende ayo.